Ekoatora: Lahatsary Fanadihadiana “Zanaky Ny Jaguar” Nahazo Ny Loka National Geographic · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora: Lahatsary Fanadihadiana “Zanaky Ny Jaguar” Nahazo Ny Loka National Geographic	Voadika ny 09 Janoary 2013 1:57 GMT
Zarao: [Mankany amin'ny pejy miteny Espaniola ny rohy rehetra rha tsy misy fanamarihana hafa.]
Eriberto Benedicto Gualinga Montalvo no talen'ny Selvas Productions sady mpandrindra ny lahatsary fanadihadiana “Children of the Jaguar” – Zanaky NyJaguars, nahazo loka taminà fetibe iray natao ho an'ny horonantsary : ny loka National Geographic ho an'ny fandihadiana tsara indrindra sy ny loka Columbia's Indigenous Festival ho an'ny fanehoana tsara indrindra ny tolona iray avy amin'ireo vazimba teratany.
Ilay fanadihadiana dia manaraka ny fiainan'ireo mponina ao Sarayaku any atsimon'ny faritr'i Amazona ao Ekoatora sy ny tolon-dry zareo anoherany ireo orinasa maro rantsana erantany [En] mitetika ny hitrandraka ny tahirin-tsolika ambanin'ny tany ao amin'ny alan'i Amazona. Enimbolana no fe-potoana nandraketan'i Eriberto ilay fanadihadiana, nanomboka Jona hatramin'ny Desambra 2011, tany Sarayaku tao amin'ny faritanin'i Pastaza [En]. Nalefa taminà trano fandefasana sarimihetsika maro ilay tsanganasa, toy ny National Geographic All Roads Film Festival, Colombia's Indigenous Peoples’ Film and Video Festival, Ecuador's EDOC (Encounters of the Other Cinema) Festival, sy ny International Film Festival ao Bruxelles.
Eriberto Benedicto Gualinga, tale nitantana ny “Zanaky ny Jaguar”. sary: Redes indígenas.
Global Voices: Nahoana no ny lahatsary “Zanaky ny Jaguar”?
Eriberto: Zaza mpandova avy amin'ny shaman iray izay afaka mivadika ho jaguar ny fianakaviako — ny jaguar dia miady hatramin'ny fara-fofonaina mba hiaro ny faritry ny taniny– izany no antony iheveran'ireo vahoaka Sarayaku ny tenany ho zanaky ny jaguar.
GV: Ny tena avoitra ao anatin'ilay lahatsary?
E.G.: Ny dia lavitr'ezaky ny solontenan'ireo Sarayaku miatrika [ny fitsarana] any Costa Rica hiaro ny fampanajàna ny zon-dry zareo [zo maha-olona sy zon'ireo vondrom-piarahamonina maro hafa] manoloana ny Governemantan'i Ekoatora.
GV: Inona no tena nisarika ny sainao indrindra rehefa tonga ny fotoana handraketana ny fanadihadiana?
E.G.: Ny fandaminana, ny fijoroana ho vavolombelona, ny dia lavitr'ezak'ireo vahoaka Sarayaku, ny sasany amin'izy ireo izay tsy mbola nahita velively ny renivohitr'i Ekoatora akory, indrindra moa fa hoe nandeha fiaramanidina; ary mbola vitsy amin-dry zareo aza no afaka hisaintsaina ny hoe tahaka ny ahoana moa izany mipetraka amin'ny sezan'ny Fitsarana [ny Zon'olombelona] any Costa Rica izany.
GV: Iza ireo mpilalao fototra sy ny haingon-tsehatra?
E.G.: Ireo mpikambana [ao amin'ilay vondrom-piarahamonina] nandeha nankany Costa Rica. Ireo mpitantara dia tsy iza fa ny tenako, Eriberto Gualinga (tale), Patricia Gualinga (nampiandraiketina ny vehivavy sy ny ankizy) ary Ena Santi (vavolombelona).
GV: Tsy maintsy nisedra sakana maro ve?
E.G.: [Eny], Ny fandaniana ara-bola aloha dia fanamby iray tsy maintsy atrehana ho an'ny famokarana rehetra ataon'ny vahoaka vazimba teratany.
GV: Amin'ny fijery ny hoavin'ny fanaovana sarimihetsika, nanao ahoana ny niainana ny famokarana ity fanadihadiana ity?
E.G.: Fanampin'ny fandraketena an-dahatsary ny vohitra, dia tsy maintsy nandrakitra an-tsary sehatra hafa koa aho, [toy ny] ao anatin'ilay firenena [miaraka aminà] zava-misy samihafa iainana , nampitombo ny fahalalana artisitika sy fahatsiarovan-tena manokana tamin'izany.
GV: Ahoana ny fihetsehamponao mikasika ny maripankasitrahana azonao tamin'ny sokajy fanadihadiana tsara indrindra tao amin'ny National Geographics’ All Roads Film Project?
E.G.: Izay mety ho fankasitrahana dia fankaherezana daholo hanohy ny asa ho an'ireo vahoaka vazimba teratany. Mahatsapa ho feno hery kokoa ary milamin-tsaina [Ny olona] mahafantatra fa hoe mba noraisina sy nankasitrahana ny asany.
GV: Inona izao no tetikasa efa ketrehanao ao an-tsainao ao?
E.G.: Miasa amin'ilay lahatsary manaraka momba ny fiainana anaty ala mikitrok'ireo KAWSAK SACHA; ary hanazava amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny lahatsary any an'ala [fa] misy olona mitovy amin'izy ireo (olona ara-panahy) izay mpiandry/mpiahy ny Ala mikitroka, ary mifandray tsy tapaka amintsika amin'ny alàlan'ireo shamans ry zareo.
Sarayaku dia any amin'ny faritany atsinanana ao Pastaza any amin'ny faritr'i Amazona ao Ekoatora. “Zanaky ny Jaguar”, fanadihadiana iray izay mandoko tsara ny adim-piainana isan'andro atrehan'ireo mponina ao amin'ity vohitra ity, dia fijoroana ho vavolombelon'ny fisianà vondrom-piarahamonina iray malalaka izay mijoro tsy mihemotra amin'ny fiarovany ny alan'i Amazona. Hatreto, tsy mbola nihatra aloha ny fifehezana avy amin'ilay fikambanana iraisampirenena.
Ny 18 Desambra 2012, nahazo ny loka International Recognition i Eriberto Gualinga, nomen'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ao Ekoatora ho azy noho ilay lahatsary “Zanaky ny Jaguar”.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraGina Yauri
4 andro izayMeksikaNy Tsimatimanota No Fehikibo Mampifandray Ny Fandripahana Tlatlaya, Ny Mpianatra 43 Tsy Hita Ary Ny Fandosiran'i El Chapo
Vakio amin'ny teny English, 日本語, Français, Ελληνικά, Español
FanoheranaFifandraisana iraisam-pirenenaLalànaMediam-bahoakaSarimihetsikaTeratanyTontolo_iainanaZavakanto & KolontsainaZon'olombelona